Sun, May 27, 2018 | 21:39:32 NST
13:56 PM (1 year ago)
प्रश्नः म कान कम सुन्छु । बिएड पास गरेको छु । उमेर ३० बर्ष भयो । रोजगारीका लागि विदेश जान चाहन्छु । म विदेश जान पाउँछु कि पाउँदिन् ? अनि विदेश पुगेपछि कुनै समस्या पर्ला कि ?
उत्तरः कैलाश खड्का, अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ - दिपक जी,सबै भन्दा पहिले तपाईंको श्रवणशक्ती कती हो त्यो जाच गर्नुपर्‍यो। यदि अाैषधी गरेर वा कुनै यन्त्र जडान गरेर तपाईंको श्रवण शक्ती साधारण अवस्थामा फर्किन्छ भने तपाईंलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान कुनै समस्या हुदैन। अन्यथा सबै जसो गन्तब्य मुलुकले श्रवणशक्ती कम हुने र नहुने दुबैलाई अनफिटमा राखेको छ।